Genius achapa mazwi enziyo kuApple Music | IPhone nhau
Genius, sezvavanozvidana, ndiyo enisaikoropidhiya huru kwazvo yemumhanzi ichipa iwo mazwi, nyaya uye kuda kuziva kwenziyo mukushandira kwavo.
Iwe unogona kuzviziva kubva kuSpotify, iyo yanga iri nemasevhisi eGenius akavakirwa mukati kwenguva refu. Zvino, Ichave zvakare kuwanikwa kune Apple Music vashandisi zvakananga kubva kuapp kupa mazwi ezviuru zvenziyo kuApple Music sevhisi.
Chikamu chikuru che chibvumirano pakati peApple Music naGenius ndizvo Apple Music yakave mutambi wepamutemo wenziyo dzakaridzwa paGenius, ese ari mu dandemutande sezvazviri muApp app. Iyi sevhisi yave kuwanikwa uye isu tinogona kuteerera kuchikamu (kana isu tisiri Apple Music vashandisi) kana tese (kana isu tiri vanyoresa uye kupinda mukati) yenziyo dzakananga kubva kuGenius webhu kana app.
Ben Gross (Genius) akataura zvinotevera:
"Tinodada nekuita Apple Music mutambi wedu wepamutemo, uye tinofara zvikuru kuunza mazwi eGenius kune yavo inoshamisa [Apple Music] chikuva".
Genius haingopa chete mazwi enziyo, asiwo vanovavarira kuwedzera zvido, nyaya uye ruzivo kuimba yega yega, yavanodaidza kuti "Shure kwemazwi" (kupfuura mazwi). Zvese izvi zvakawiriraniswa kuti tizviverenge isu tichiteerera kurwiyo ruri mubvunzo.
Kungofanana neApple Music services yatove muGenius, zvinoita sekunge lGenius ruzivo uye dhatabhesi haisati yauya kuApple Music.
PaSpotify, uko Genius - "Behind the lyrics" inowanikwa kune dzimwe nziyo, ivo vane sevhisi yakavakirwa mukati chaimo mavhavha enziyo. Mune mawonero angu, kusangana kwakapindirana - kunyanya nekuti kunoitwa nekukasira uye, kunyangwe kuchiimisa, inoramba ichionekera kumashure- uye izvo Ndinovimba Apple inoziva kubata nenzira yakachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Genius ichapa mazwi kuApple Music
Apple inonyora mhando nyowani yePad Pro muChina